Madaxweynaha Jubba oo iclaamiyey in aysan tegi doonin shirka arrimaha jubbooyinka Muqdisho – Radio Daljir
Oktoobar 7, 2013 5:01 b 0
Kismaayo, October 7, 2013 – Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba Axmed maxamed Islaam (Madoobe), ayaa shaaciyey in maamulkiisa aysan ka qayb-geli doonin shirka arrimaha arrimaha Jubbooyinka ee la doonayo in lagu qabto magaalada Muqdisho.
Waxaa uu sheegay madaxweyne Axmed Madoobe in laga baxay heshiiskii Adis Ababa, isagoo xusay in heshiisku dhigayey in ay booqdaan Muqdisho, kadibna la isugu yimaado magaalada Kismaayo si halkaas loogu qabto shir dib-u-heshiisiineed.
?Heshiiskii waan fulinay ahaa in aan muqdisho tagno oo aan la kulano madaxda, balse in shirkii lagu qabto Kismaayo oo heshiiska ku jirtay waa laga baxay oo dhanka dowladda ayaa saas laga sameeyey, mana u socono Muqdisho.? Ayuu yiri madaxweyne Madoobe.
Madaxweynaha Jubba waxaa uu si cad u sheegay in aysan qorshaha ugu jirin in ay ka qayb-galaan shir looga hadlayo arrimaha jubbooyinka oo ka dhacaya Muqdisho 21 bishaan October, warka madaxweynaha mid la mid ah waxaa horay u soo saaray Afhayeenka Jubba Cabdinaasir Seeraar.
Dowladda Soomaaliya ayaa dib u dhigtay shirkii dib-u-heshiisiinta ee Jubbooyinka kaas oo 5 bishaan lagu qaban lahaa magaalada Muqdisho, balse khilaaf jira darteed dib loo dhigay, in kastoo Madaxweynaha Jubba uu maanta soo saaray warka sheegaya in aysan shirka tegi doonin.